चर्को घाम लागेपछि ११७ रेल्वे सेवा प्रभावित - Himalayan Kangaroo
चर्को घाम लागेपछि ११७ रेल्वे सेवा प्रभावित
Posted by Himalayan Kangaroo | ३० पुष २०७२, बिहीबार ०५:२३ |
एजेन्सी । घाम लागेकै कारण रेल्वे सेवा प्रभावित हुन्छन् भन्ने सुन्दा शुरुमा जोसुकैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर बेलायतमा चर्को घाम लागेको कारण एक–दुई होइन सयभन्दा बढी पटक रेल्वे सेवा प्रभावित भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
चर्को घाम लागेकै कारण कयौं पटक रेल्वे सेवा नै रद्द गर्नुपरेको र कतिपटक रेलमा ढिलाइ भएको सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
साउथ इस्टर्न रेल्वे कम्पनीले ट्वीटर मार्फत यसबारेमा प्रष्टिकरण दिएपछि यो तथ्य खुलेको हो । कम्पनीले चर्को घामका कारण रेल्वे सेवा सञ्चालनमा चर्को हैरानी खेप्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । जाडो महिनामा आकाशमा सूर्य निकै नजिक आउँने भएकोले त्यसको उज्यालोले चालकहरुलाई निकै समस्यामा पार्ने गरेको बताइएको छ ।
प्रकाशका कारण रेल चालकहरुलाई सिसी टिभी मनिटर हेर्न गाह्रो हुने गरेको उल्लेख छ । यही कारणले अहिलेसम्म ११७ पटक भन्दा बढी रेल्वे सेवा प्रभावित भएको समाचारहरुमा उल्लेख छ ।
रेल्वे कम्पनीको यसप्रकारको स्पष्टीकरणलाई सर्वसाधारणले भने गैरजिम्मेवार भन्दै उडाएका छन् । एक यात्रीले ट्वीट गरेका छन्– यो त हदै भयो । कहिले पानी,कहिले अत्याधिक गर्मी,कहिले अत्याधिक जाडो । अब आएर घामको प्रकाशको कारण पनि रेल्वे सेवा प्रभावित भयो रे !
Previousकाठमाडौंमा जताततै अष्ट्रेलियन एडुकेशन मेला
Nextइन्डोनेसियाको जकार्तामा बम आक्रमण,३ को मृत्यु
मौसमको सूचना अब बेलुनबाट
२४ श्रावण २०७४, मंगलवार ०२:१२
भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान धोनीको तीन सेट मोबाइल चोरी
६ चैत्र २०७३, आईतवार ०४:५२
९१ वर्षको उमेरमा डिग्री हासिल !
१२ भाद्र २०७४, सोमबार ०५:१९